Wasaarada Maaliyada oo bilaabaysa qadista Canshuuraha – idalenews.com
Wasaaradda Maaliyadda iyo Qorsheynta Soomaaliya ayaa sheegtay in ay deg deg ubilaaban doonaan qaadista canshuuraha bariga kadib markii maanta lasoo gabagabeeyay aqoon isweydaarsi socoday muddo shan maalmood ah oo looga hadlayay habka qaadista canshuurha Qaranka.
Aqoon isweydaarsigan socday mudada shanta maalmood ah oo kasocday hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay habka canshuuraha Qaranka iyo sida loo bilabilahaa qaadistooda.
Guddoomiyaha xarun goboleedka hogaaminta iyo horumarinta Cabdi Shire Warsame oo ay xaruntiisu soo qabanqaabisay doodan ayaa tilmaamay in dadkii ka qeyb galay ay ka faa’ideen.
Wasiir dowlaha wasaradda maaliyada iyo qorsheynta Maxamed Rashiid Sheekh Daahir oo sooxiray aqoon isweydaarsigan ayaa sheegay in ay muhiimtahay bixinta casnhuurta si waxloogu qabto dalka iyo dadka isagoo xusay ineysan horumarikarin bulsho aan canshuurbixin.
dadkii ka qeybgalay mudada shanta maalmood ah ee uu aqoon isweydaarsigani socday ayaa iskuraacay sida loogu baahanyahay in dalka laga bilaabo qaadista canshuuraha maadama ay dowladda Soomaaliya hanatay amniga dalka.
Wafdigi Maamul usameynta Jubbaland ee ku sugnaa Gobolka Gedo oo Boqday Dagmoyinka Luuq, Doolow iyo Balad Xaawo